दलान नेपाल : ढुक्क हुनुस - एकिकरण हुदैन
ढुक्क हुनुस - एकिकरण हुदैन
मंगलवार बिहानै एक जना युवा नेतासंग फोनमा कुराकानी भईराख्दा मैलै मधेशी पार्टीहरु विच भनिएको एकिकरणको चर्चा उप्काए । उनले भने, तपाई ढुक्क हुनस यो एकिकरण कसैको पनि कोई संग हुने वाला छैन । त्यस्तै कुनै चमत्कारै भएमा मधेशी पार्टीहरु विच एकिकरण हुन्छ नत्र कुनै पनि सम्भावना छैन । उनले प्रयोग गरेको चमत्कार तत्काल सम्भव छैन भनेर म प्रतिउत्तर गरे, उनले त्यस्तो चमत्कारको पनि सम्भावना देखा परी नसकेको बताए । त्यसो भए किन मधेशी नेतृत्वहरु एकिकरणको यत्रो हल्ला फिजाए त ? उनको सिधा जवाफ दिए, निर्वाचन पछि मधेशी नेतृत्वहरु पार्टी हाक्ने अवस्थामा थिएन त्यसमा पनि समानुपातिकको खेलावेलावाट नेता कार्यकर्ताको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने कुनै उपाय थिएन । यी नेतृत्वहरु साच्चिकै एकिकरणको लागी अहिले सम्म कुनै कसरत नै गरेका छैन ।
ऋघिल्लो साता मात्रै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो संग एकिकरण गर्न नसकेपछि विजय गच्छदार संग गोप्य वार्ता गरिरहेको समाचार आयो । तर वार्ता प्रक्रियामा सामेल फोरम नेपालका एक नेताका अनुसार गच्छदारसंग त्यस्तो कुनै वार्ता नै अहिले सम्म भएको छैन । दोस्रो तहका नेताहरु विच समान्य कुनै प्रसंगमा कुराकानी भएको भएपनि एकिकरणको लागी गच्छदारसंग त्यस्तो कुनै कुराकानी नभएको उनले वताए । जानकारहरुको बुझाईमा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदार विच एकिकरणको कुनै सम्भावना छैन नत आजको मिती महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो र यादव विच नै ।
त्यही भएर होला सबै पार्टी आ आफनो तालले पार्टीको आन्तरिक गतिविधीलाई तीव्र दिन थालेका छन । हालै तमलोपाले आफना सबै जिल्लाहरुमा विस्तारित बैठक गरेर अधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन भने सदभावना पार्टीले पनि हरेक जिल्लामा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । फोरम नेपालले पनि जिल्ला स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिन थालेका छन । यसरी एकिकरण गर्ने भए यी दलहरु आफना गतिवीधीहरुलाई किन यसरी संचालनमा ल्याउने थिए । जानकारहरु भन्छन, नेतृत्वहरु एकिकरण नहुनेमा ढुक्क भएर नै यसरी पार्टीको गतिविधी तिर लम्किएका हुन ।
द्योस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजय भएपछि यी दलहरु जोडतोडका साथ एकिकरणका लागी तम्सीएको बताएका थिए । त्यही अनुरुप कयौन गोप्य र खुल्ला बैठकहरु पनि सम्पन्न भए । तर कुरो चाही त्यही गएर अडकियो एकिकरण पछि को अध्यक्ष ? राजेन्द्र महतो खुल्ला रुपमै आफु महन्थ ठाकुरको नेतृत्व स्विकार गर्न तयार रहेको बताए पनि यसप्रति यादव चाही कुनै प्रतिक्रिया नदिई मौन रुपमा अस्वीकार गरे । विचमा कतिपय भित्रियाहरुले यादव ठाकुरलाई स्विकार गर्न तयार रहे पनि महतोलाई आफु सरहनै कार्यकारी अध्यक्ष मान्न तयार नरहेको कुरा पनि आयो । त्यस लगत्तै महतो आफु साधाररण सदस्य नै भएर भएपनि एकिकरण गर्न तयार रहेको सार्वजनिक गरे । तर कतिपय भित्रियाहरुको बुझाईमा एकिकरणका लागी उपेन्द्र यादव अझै मानसिक रुपमा तयार देखिएनन ।
Unknown November 28, 2014 at 2:45 PM